‘मधेसमा एमालेले ‘मिस’ गर्‍यो, कांग्रेसका दिन सकिए’ » होमल्याण्ड खबर
admin September 28, 17 6:37 am
९ असोज, काठमाडौं । मधेसमा आफ्नो पार्टीलाई आश्चर्यजनक जित दिलाएर फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं आइपुगेका छन् । सोमबार बिहान अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यादव मधेसको चुनावी परिणामबाट निकै उत्साहित देखिए ।
नेपाली राजनीतिमा कुशल खेलाडीको पहिचान बनाएका यादवले धेरै मानिसलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी मधेसमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । हामीले सोध्यौं- तपाईले त जादु नै गर्नुभयो नि ! यसको रहस्य के थियो ?
जवाफमा उनले भने – ‘मेहनतचाहिँ गरेको हो । अरु के गर्नुहुन्छ ? मसँग न साधन स्रोत थियो, न सत्ता, न शक्ति । सबै मेरा विरुद्धमा थिए । अरुतिर त आकाशबाट पनि पैसा बर्सिन्थ्यो । शासन-प्रशासन पनि भएको, साधन स्रोतको कमी नभएको । यो अवस्थामा हामीसँग मेहनत नगरिकन त अरु उपाय थिएन । त्यसैले हामीले मेहनतचाहिँ गरेको हो ।’
प्रदेश २ को समग्र चुनावी परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जनताले दिएको म्यान्डेटलाई हामी स्वीकार्छौं । धेरै ठाउँमा हामी छ भोट, ८ भोट, १० भोटले हारेका छौं । यसले के देखाउँछ भने तराईका जनता अहिले पनि फोरम नेपालको पक्षमा छन्, फोरम नेपालले नै तराईको विकास र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ भनेर जनताले हामीलाई विश्वास गरेको अर्थमा हामीले यसलाई लिएका छौं ।